သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲက AUD/USDအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ် (RBA)၏ ငွေကြေးမူဝါဒများသည် သြဇီဒေါ်လာတန်ဖိုးကို မောင်းနှင်နေသည့် အရေးကြီးဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ် RBAဆွေးနွေးပွဲကို သြဂုတ်လ ၁ရက်နေ့ ၀၇:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်.
နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် သြဇီဗဟိုဘဏ်၏ အတိုးနှုန်းကို ယခင်အတိုးနှုန်းဖြစ်သည့် ၁. ၅%အတိုင်းသာ မပြောင်းမလဲ ထားရှိခဲ့ပါသည်. သို့ရာတွင် ငွေဖောင်းပွမှုတိုးတက်လာပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများ အခြေအနေကောင်းမွန်တိုးတက်လာတာကို စောင့်ကြည့်ပြီး အတိုးနှုန်းကို နောက်ထပ် ၂%လောက်အထိ တိုးသင့်ကြောင်း အရိပ်အမွက်သဘောပြောသွားခဲ့တာကို တွေ့ရတာ ဖြစ်ပါသည်. RBA၏ ထိုအရိပ်အမွက် စကားကြောင့်ပင် AUD/USDသည်၂၀၁၅အစပိုင်း ပြီးသည့်နောက် အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားတစ်ခုအထိ မြင့်တက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်. ထိုကဲ့သို့ သြဇီဒေါ်လာတန်ဖိုးတက်လာခြင်းက ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းတင်သကဲ့သို့ပင် ငွေဖောင်းပွမှုတိုးတက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အတိုးနှုန်းသာ တကယ်တင်ခဲ့ပါက ငွေဖောင်းပွမှုဆက်တက်လာပြီး ငွေကြေးတန်ဖိုးအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်တာကြောင့် ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်မယ့်အရေး ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးသည့် အခြေအနေဖြစ်နေတာကို တွေ့နေရပါသည်.
RBA၏ ယခု သြဂုတ်လဆွေးနွေးပွဲသည် အလွန်အရေးကြီးလှပါသည်. ယခုဆွေးနွေးပွဲကြောင့် AUD/USDအားကောင်းလာနိုင်ပြီး trendအသစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်. သြဇီဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်မည့်ကိစ္စကို အရိပ်အမွက်အနေနှင့်ပင် ဆက်ပြီးပြောနေခဲ့ပါက AUDတက်နိုင်တာ ဖြစ်ပါသည်. သို့သော်လည်း RBAအနေနှင့် သြဇီဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်းအရမ်းမြင့်လာနေပြီလို့ သတိပေးပြောဆိုသည့် လေသံပါလာခဲ့ပါက ဈေးကွက်တွင် AUD/USDကို အရောင်းများသွားနိုင်ပါသည်.